> Resource > Memory Card > Qaabka Error Sida loo dayactir Memory Card
Ayay ku dhici kartaa inuu ka soo kabsado ka dib markii Data Error Qaabka Memory Card
Saaka markii aan isku dayay in aan ka computer furi aan card SD 2GB Micro via cable xogta, ayaa sheegay in aan card u baahan tahay in la formatted. Laakiin markii aan go'aansaday in qaab, shaashadda ii sheegay in aan card laga yaabaa in aan la aqoonsan yahay. Ka dib markii aan sii hesho fariin qalad qaabka. Waxaan waayi doonaa dhammaan xogta ku saabsan kaadhka xusuusta wixii ii baxay? Fadlan iga caawiya in ay dib u helaan xogta aan. Waad ku mahadsan tahay wax badan.
Xasuusta baadi qaab card dhaca sabab u ah dhowr sababood, sida baadi nidaamka, hawlaha aadanaha aan habboonayn, jeermiska fayraska, iwm Haddii qalad qaab kaadhka xusuusta kulan kaarkaaga, fadlan joojiya isla markiiba la isticmaalayo, hana isku dayin in aad u qaab. Waxaana suurto gal ah in aad soo kaban karto xogta ka dib qaab baadi kaadhka xusuusta iyo inta uu xogta ku yaal aan la overwritten.
Si aad u xaliyo qaab baadi kaadhka xusuusta ama ka soo kabsadaan xogta ka kaarka, waxaad isku dayi kartaa adiga oo isticmaalaya barnaamijka dhinac saddexaad ah. Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa qalad qaab barnaamijka xogta noocan oo kale ah kaadhka xusuusta, waayo, waxaad u soo kabsadaan xogta laga kaadhka xusuusta formatted ama kharribeen fudayd. Waxaa soo kabanayo kala duwan oo ka mid ah qaabab file ka kaadhka xusuusta ku qaldoonnay, oo ay ku jiraan music, sawirada, videos, waraaqaha iyo in ka badan. Feature khatar la'aan iyo si sahlan loo isticmaalo ee barnaamijka waxay doorashada ugu fiican ee aad ka bogsato xogta ka dib qalad qaab kaadhka xusuusta ka dhigaa. Hadda waxa ay si buuxda u la socon kara nooc kasta oo kaadhka xusuusta sida SD, kaarka SD Micro, kaarka CF, kaarka MMC, iwm
Download version maxkamadda si uu u xaliyo qaab baadi kaadhka xusuusta hadda!
U dayactir Qaabka Error Memory Card ee 3 Talaabooyinka
Fiiro gaar ah: In kastoo kaadhka xusuusta aad oo aysan furi karin, fadlan oo ku xirmaan your computer iyo in la hubiyo waxa la tusay karaa sida disk ah ee maamulka disk.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan xasuusta qaab card kabashada xog qalad
Ku rakib oo ay maamulaan Wondershare Data Recovery barnaamijka on your computer, aad arki doonaa suuqa kala ah sidan.
Si aad u hagaajin xasuusta baadi qaab card, oo aad qaadi karto "lumay Recovery File" mode sida isku day ah oo hore.
Tallaabada 2 baarista kaadhka xusuusta ku qaldoonnay
Halkan suuqa kala barnaamijka tusi doono oo dhan qoruhu on your computer, oo ay ku jiraan kaadhka xusuusta aad. Waxaad dooran kartaa kaarka oo guji "Start" badhanka si ay u bilaabaan baar files waxa on.
Tallaabada 3 Ladnaansho xogta ka dib qalad qaab kaadhka xusuusta
Ka dib markii iskaanka, dhammaan xogta soo kabsaday aad kaadhka xusuusta ku qaldoonnay la soo bandhigi doonaa "Nooca File" iyo qaybaha "Jidka". Waxaad ka arki kartaa magacyada file asalka ama sawiro Falanqeynta in lagu hubiyo sida badan faylasha lagu soo kabsaday kartaa kaadhka xusuusta ku qaldoonnay.
Markaas oo keliya u baahan tahay in aad calaamadeyso files aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u badbaadin on your computer.